juin 2016 - Page 2 sur 5 -
22/06/2016 hasina 10043
Il y a 20 ans jour pour jour, le Rova d’Antananarivo ou Anatirova appelé plus communément Manjakamiadana prenait feu. Par devoir de mémoire, la rédaction republie un article du 07 novembre 1995. À qui profite …Tohiny
22/06/2016 hasina 6780
Mitohy hatrany ny fanatanterahina ireo tetikasan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatreto. Eo ny fanamboaran-dalana, sy ny fananganana ireo fotodrafitrasa maro ho fanomezana endrika ny tanàna, indrindra amin’izao handraisantsika ireo vahiny maro hamonjy ny fihaonana an-tampon’ireo firenena …Tohiny
22/06/2016 hasina 8406
Famitahana tsotra izao, izay no nambaran’ireo olona nantsoin’ny mitsangana ry Malagasy nanotrona azy ireo tamin’ny famoriam-bahoaka farany nataony teny Andrefanambohijanahary. Nitaraina mantsy ireo olona nangonin’izy ireo satria hatramin’ny androany, mbola tsy voaloa ny vola nampanantenaina …Tohiny
22/06/2016 hasina 7699
Niala maina hatrany ry Miara-manonja tamin’ny fanakorontanana rehetra nataony teto an-drenivohitra. Fanakorontanana ny firenena tokoa mantsy no tanjon’ireto mpitarika ireto, fa mody sarontsaronana amin’ny fitakiana amin’ny maha mpanao gazety. Porofon’izany misora-tena ho mahasolo tena ny …Tohiny
Manana ny anaram-boninahitra Docteur Honoris Causa ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Ny praiminisitra Québecois Philippe Couillard no nampisalotra azy izany, omaly, nandritry ny fanamarihana ny faha-30 taonan’ny INSCAE. Eto an-toerana manatrika ny fihaonamben’ny Frankofonia rahateo ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Tsy maintsy « hihiratra »ny masoandro